Wasiir ka soo hor jeestay Go’aan ka soo baxay Madaxweyne Farmaajo+dadn badan oo wasiirka taageeray | Xaqiiqonews
WARARKAWasiir ka soo hor jeestay Go’aan ka soo baxay...
Wasiir ka soo hor jeestay Go’aan ka soo baxay Madaxweyne Farmaajo+dadn badan oo wasiirka taageeray
Qoraal uu Wasiiru Dowle Wasiir Mahad Salaad kusoo daabacay bogiisa Facebook, ayaa waxa uu kaga hor yimid Hadal dhawaan uu sheegay Madaxweynaha kaas oo ahaa in abaal marin lacageed oo gaareysa 100,000 oo Dollar, la siinayo qofkii soo gudbiya ama soo sheega baabuur qaraxyo wada.
Wasiiru dowladaha ayaa ku tilmaamay Balanqaadka noocaasi ah in uu sahlaayo inay bataan Qaraxyada si dhaqaale loogu helo.
Nuqul kamid ah qoraalkiisa ayaa u qornaa ”Aniga waxay ila tahay Soomaaliya Amnigeeda inaan lagu sugi karin lacag la bixiyo ee waxaan u baahanahay Istaraatijiyad Qaran oo leh Mug Dhaqaale, Mug Ciiddan iyo Mug Abaabul Bulshadeed”.
Wasiiru dowlaha Madaxtooyadda Mahad Maxamed Salaad, oo qoraal dheer kusoo bandhigay beejkiisa ayaa waxa uu kusoo bandhigay ilaa 3 Sababood oo uu ku micneynaayo dhibaatooyinka ka dhalankara.
Shabaab Sababta 1-aad:
Kaba soo qaad bishii in la soo sheego 10 Qarax, kharashka ku baxaya waxa uu noqonayaa hal million dollar. Kharashkaasna kama go’i karo Miisaaniyada Dowlada oo ku tiirsan oo kaliya lacagaha ka soo xarooda Dekada iyo Airport Magaalada Mogadishu iyo deeqaha laga sugayo Dowladaha Ajnabiga ah oo iyadana ku xiran shuruudo adag, ayna adag tahay in la fuliyo.!!!
Sababta 2-aad: Waxaa jiri kara Hay’ado iyo shaqsiyaad ka ganacsada qaraxyada been abuurka ah ee marar badan la sheego in la qabtay.
Marka waxay dhiiragelin u noqon kartaa Suuqa Madow ee Ka-ganacsiga Qaraxyadda !!!
3-aad: Kharajkaas la bixinayo waxay kooxaha Nabad Diidka ah u isticmaali karaan maaligelinta Qaraxyadooda. Tusaale ahaan: Baabuurta qaraxyada ay u isticmaalaan kooxaha Nabad Diidka ah qiimo ahaan waxay u dhaxeeyaan $5,000 ilaa $15,000 dollar.
Marka waxaa suuragal ah inta soo sheegaan hal gaari inla siiyo lacagtii ay ku meel gelin lahaayeen 10 gaari oo kale.!!! Sidaas daraadeed waxaan qabaa la dagaalanka Kooxaha Nabad Diidka inay u baahan tahay Istaraatijiyad ka ballaaran Lacag la bixiyo!!!
Saraakiisha booliska ayaa sheegay in xirnaashiyaha waddooyinka muhiimka ah uu billaaban doono wixii ka dambeeya 5:00 galanimo ee maanta oo talaada ah.
Xirnaashiyaha waddooyinka ee marka madax shisheeye Muqdisho imaanayaan waxaa caan ku ahaa dowladdii Xasan Gurguurte madaxda ka ahaa waxaana muuqata iyo maamulka cusub ee Farmaajo uu maray wadadii xukuumaddii hore, malaayiin kamid ah shacabka Rayidka ah ayaa dhib kala kulmaya xirnaashiyaha waddooyinka.